यसकारण भ्रामक छ भाइरल भएको ‘ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ : डब्लुएचओ’ शीर्षकको समाचार – MySansar
सोमबार एउटा समाचार निकै भाइरल भयो सामाजिक सञ्जालमा। ‘ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ : डब्लुएचओ’ शीर्षकमा यो समाचार थुप्रै नाम चलेका, नचलेका सबैखालका अनलाइनहरुमा आएका थिए।
दुई वर्षदेखि दिक्क बनाइरहेको कोभिड-१९ महामारी अन्त्य हुने निश्चित भए त गज्जबकै खुशीको कुरा हो नि। त्यही भएर होला धेरैले खुसीको खबर लेख्दै यस्ता समाचार सेयर गरेको पनि देखियो।
खासमा यो पूर्ण रुपमा सही समाचार नभएर भ्रामक खबर थियो। यो विषयमा नेपालफ्याक्टचेकमा फ्याक्ट चेक गरिएको छ। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। के कारण भ्रामक छ त यो समाचार? आउनुस् विस्तारमा बुझौँ।
किन भ्रामक यो समाचार ?
भाइरल भएको समाचार। यो स्क्रिनसट राजधानीडेलीको हो। यही विवरण अरु अनलाइनहरुमा पनि हुबहु छ। गुगलमा “ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछः डब्लूएचओ” राखेर सर्च गर्दा ५ सयभन्दा बढी नतिजा भेटियो।
सबभन्दा भाइरल भएको रातोपाटीको फेसबुक पोस्ट। यो पोस्ट सोमबार रातिसम्म ६०९ सेयर भएको छ भने ४ हजार बढी रियाक्सन र १९४ कमेन्ट छन्।
१) डेटलाइनै भ्रामक
यो समाचारको डेटलाइनमा न्युयोर्क लेखिएको छ। हेर्नुस् इकागज, राजधानी र नेपालसमाचारपत्रको समाचार। डेटलाइन भनेको जहाँ बसेर समाचार लेखियो, त्यो ठाउँको लेख्ने हो। संवाददाता न्युयोर्कमा भएर त्यहीँबाट लेखेको भए मात्रै डेटलाइन न्युयोर्क लेख्ने हो। काठमाडौँमा बसेर लेखेको भए काठमाडौँ नै लेख्नुपर्छ। खासमा यो समाचार एएफपीको समाचारको आधा अधुरो अनुवाद रहेछ। एएफपीको समाचारमा भने कोपनहेगन डेटलाइन छ। हेर्नुस् फ्रान्स२४ को समाचार। काठमाडौँमा बसेर कोपनहेगन डेटलाइनको एएफपीको समाचारलाई अनुवाद गर्दा न्युयोर्क डेटलाइन हाल्नु गलत हो।
२) स्रोत नै भ्रामक
एउटै खालको शीर्षक र हुबहु समाचार भए पनि धेरैले समाचारको स्रोत खुलाएका छैनन्। स्रोत नखुलाउँदा समाचार जुन अनलाइन मिडियामा छापियो, उसैले लेखेको जस्तो भान हुन्छ। खोजी हेर्दा यो समाचार नयाँ समाचार एजेन्सी ‘न्युज कारखाना’बाट उत्पादन भएको पाइयो। नेपालमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र भिडियो समाचारको एजेन्सी न्युज एजेन्सी नेपाल (NAN) ले मात्र समाचार सामग्री उत्पादन गरी बेच्ने गरेकोमा पछिल्लो केही समय यता समाचार, फोटो र भिडियोको समेत सेवा दिने गरी ‘न्युज कारखाना’ नामको समाचार एजेन्सी सुरु भएको छ। शुल्क तिरेर ग्राहक बनेपछि यस्ता एजेन्सीका सामग्री सम्बन्धित मिडियाले प्रयोग गर्न पाउँछन्।
सामान्यतया आफूले उत्पादन गरेको समाचार सामग्री बाहेक एजेन्सीका समाचार प्रयोग गर्दा एजेन्सीको नाम खुलाउने प्रचलन छ। तर नेपालमा भने पैसा तिरेर किन्नु पनि पर्ने, त्यसलाई क्रेडिट पनि दिनुपर्ने? किन दिने भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यही कारण राससलाई क्रेडिट दिए पनि (कसैकसैले त त्यही पनि दिन्नन्) नान र न्युज कारखानालाई क्रेडिट दिन गाह्रो मान्छन्। अरु बेला त थाहा भएन, तर जब एजेन्सीले गल्ती गर्छ, त्यसको दोष पनि स्रोत नखुलाएका कारण एजेन्सीलाई नभएर आफैलाई आउने खतरा पनि हुन्छ।
३) भन्नेको पद नै भ्रामक
शीर्षकमा डब्लुएचओ उल्लेख गरिए पनि समाचार विवरणमा भने पहिलो लाइनमा ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक’ लेखिएको छ भने दोस्रो लाइनमा ‘डब्लूएचओका महानिर्देशक हान्स क्लुग’ले भनेको उल्लेख छ। निर्देशक हो कि महानिर्देशक भन्ने कुरामा नै समाचार लेख्ने कन्फ्युज रहेछ। खासमा हामीले डब्लुएचओको वेबसाइटमा खोज्दा उनको पूरा नाम Dr Hans Henri P. Kluge रहेको र उनी समाचारमा दावी गरिए जस्तो डब्लुएचओका निर्देशक वा महानिर्देशक नभएर युरोपका लागि डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक रहेको भेट्टायौँ।
४) कहाँ बोलेको त ? नखुलाएर भ्रामक
भाइरल समाचारमा हान्स क्लगले कहाँ यो कुरा बोलेका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन। कहाँ बोलेको, कुन कार्यक्रममा बोलेको केही पनि खुलाइएको छैन। समाचार एजेन्सीले त झन् यो कुरा खुलाउनै पर्छ। न्युज कारखानाले वा यो समाचार छाप्ने मिडियाले आफै क्लगसँग कुरा गरेको हो त? होइन भने कोसित खुलाउनु पर्थ्यो। नखुलाएर भ्रममा पारिएको छ। खासमा फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीसितको अन्तर्वार्तामा क्लगले यो कुरा भनेका रहेछन्। एएफपीको समाचार अनुवाद गरेर पुनःवितरण गर्ने अधिकार न्युज कारखानाले लिएको छ त? के समाचारमा आए जस्तो उनले दावी गरेका हुन् त भनी खोज्ने क्रममा फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीसितको अन्तर्वार्तामा उनले यो विषयमा बोलेको देखियो। एएफपीको समाचार धेरै वटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएको देखिएको छ।
५) अधुरो, अपुरो अनुवादका कारण भ्रामक
ती समाचारहरुमा क्लगले ओमिक्रोनले युरोपमा महामारीको अन्त्य गराउन सक्ने त भनिएको छ तर सँगै जोडिएको अर्को भनाई भने भाइरल भएका समाचारमा गायब बनाइएको छ।
एएफपीको समाचारमा यस्तो उल्लेख छ-
The Covid-19 pandemic has enteredanew phase with the Omicron variant, which could infect 60 percent of people in Europe by March, and could bring it to an end, the WHO Europe director said Sunday.
“Its plausible that the region is moving towardsakind of pandemic endgame,” Hans Kluge told AFP, urging caution nonetheless due to the virus’ ability to mutate. (हेर्नुस् यो समाचार प्रकाशन भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया)
उनले युरोप क्षेत्र महामारीको अन्त्य हुनसक्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको विश्वास गर्न सकिने देखिएको बताएका छन्। तर साथमा भाइरसको रुप बदल्ने क्षमताका कारण सतर्क पनि हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
फ्रान्स २४ ले उनको अन्तर्वार्तामा आधारित एएफपीको समाचारको विस्तृत विवरण राखेको छ। त्यसमा उनका थप भनाई राखिएका छन्-
यसमा उनले फेरि कोभिड-१९ यो वर्षको अन्त्यमा फर्किए पनि महामारी नै नफर्किन पनि सक्ने त भनेका छन् तर यो भाइरसले एक पटक भन्दा बढी अचम्ममा पारिसकेकोले धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै अरु भेरियन्ट उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सचेत पनि गराएका छन्।
नेपालमा भाइरल भएका समाचारहरुमा यो विषय उल्लेख नगरी एउटा मात्र पाटो उल्लेख गरेर भ्रामक बनाइएको छ। समाचार अनुवाद गर्दा जसको भनाई हो, उसको भनाईको सबै पाटो राख्नुपर्छ। आफूलाई मन लागेको मात्र अनुवाद गर्ने, मन नलागेको अर्को चाहिँ नगर्ने गर्न पाइन्न।
डब्लुएचओ के भन्छ त ?
डब्लुएचओ युरोपले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा २०२२ जनवरी १९ मा हल्ला र तथ्य समेटेर एउटा विवरण राखेको छ। त्यसमा महामारीको अन्त्यका लागि अझै केही बाटो बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारणमा अझै सिकिस्त बिरामी र मृत्यु गराउने डेल्टा भेरियन्ट बाँकी रहेको, महामारी अन्त्यका लागि खोप अझ बृहत् स्तरमा पुग्नुपर्ने बताएको छ।
डब्लुएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडह्यानम गेब्राएससले २४ जनवरी २०२२ मा कार्यकारी बोर्ड बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओमिक्रोनलाई अन्तिम भेरियन्ट अनुमान गर्नु वा हामी महामारीको अन्त्यमा छौँ भनेर अनुमान गर्नु खतरनाक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले विश्वव्यापी रुपमा थप भेरियन्ट देखा पर्न उपयुक्त वातावरण बनेको पनि बताएका छन्।
हेर्नुस् डब्लुएचओको साइटमा सम्बोधनको पूर्ण विवरण
युरोपका लागि डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लगले ओमिक्रोनले विश्वभर कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भनेका छैनन्। तर भाइरल समाचार शीर्षकले त्यस्तो भान दिएको छ। उनले युरोप क्षेत्र महामारीको अन्त्य हुनसक्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको विश्वास गर्न सकिने देखिएको बताएका हुन्। यो सँगै उनले भाइरसको रुप बदल्ने क्षमताका कारण सतर्क पनि हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए जसलाई भाइरल भएको समाचारमा राखिएको छैन।
डब्लुएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोसले ओमिक्रोनलाई अन्तिम भेरियन्ट अनुमान गर्नु वा हामी महामारीको अन्त्यमा छौँ भनेर अनुमान गर्नु खतरनाक हुने चेतावनी दिएका छन्। ओमिक्रोनपछि महामारी नफर्किने आशा गरिएको भए पनि त्यो निश्चित भइसकेको विषय होइन र खतरा कायमै छ। त्यसैले भाइरल भएका समाचारहरु भ्रामक छन्।
पैसा तिरेको छ भन्दैमा न्युज एजेन्सीको समाचार आँखा चिम्लेर नहाल्नुस्। मेसिन हैन, मान्छे बन्नुस्। समाचार पढ्नुस्, बुझ्नुस्। मेसिन बन्नुभयो भने राससले अश्लील शब्द हालेर पठाउँदा सबैतिर अश्लील नै आएको उदाहरण पनि छ। बिर्सनुभएको भए यो पुरानो ब्लग पढ्न क्लिक गर्नुस्- राससको पछि लागेर समाचारमा अश्लील शब्द घुसाउने अनलाइनहरुलाई लाज लाग्यो कि लागेन?